ITurbine yoMoya ethe nkqo
I-FH yeTurbine yoMoya eNqolileyo
Ijini yomoya yeFX nkqo
Q Injini yomoya ethe nkqo
ITurbine yoMoya othe nkqo
ITurbine yoMoya othe tyaba
I-FK Horizontal Wind Turbine
S oHorizontal Wind Turbine
IToyi yeTurbine yomoya
FLTXNY FR 400W 800W nkqo ijenereyitha yeinjini yomoya
Q 100w- 3000w nkqo coreless maglevation umoya tur...
Imilo ye-Q 600w- 3kw Enye indlela engenamoya nkqo...
FX 400w-800w Coreless Maglev nkqo Wind Turbine
FX 3000W ukusetyenziswa ekhaya nkqo ijenereyitha yomoya
FS 1000W 2000W 3000W ethe nkqo i-Helix Wind Turbine Gen...
FS 100W-600W 12v 24v nkqo Wind Turbine
I-FH 1000W – 30KW iGenereyitha yoMgqomo oM nkqo weTurbine yoMoya
FH 5KW 10KW 20KW ON/OFF igridi yomoya eme nkqo
FH 1000W 2000W 3000W uMvelisi weTurbine yomoya othe nkqo
FH 100W-800W 12V 24V 48V Coreless Wind Turbine Genener...
S2 200w 300w 12v 24v 48v oHorizontal Wind iTurbine Gen...
SC 400W 600W 800W AC ijenereyitha yomoya encinci yasekhaya/izindlu...
I-S3 600w 800w 12v 24v 48v i-turbi yomoya encinci ethe tye...
Umzi-mveliso waseTshayina 600w 3 5 iibladeOkuthe tyaba kwe-axis umoya tu...
FLTXNY 1kw 2kw 3kw eHorizontal Wind Turbine Generator...
800w 12v 24v Ijenereyitha yeTurbine yoMoya oPhuhliweyo oMtsha Wi...
300w 400w 12v 24v 48v Iijenereyitha zeMagnet eziZisigxina zeTurbine yomoya
1. I-Gearless, i-drive ngqo, i-RPM generator ephantsi
I-2.Ubungakanani obuncinci kunye nobunzima obuncinane: Ubungakanani bayo kunye nobunzima bayo bu-30% ngaphantsi kunezo zejeneretha eziqhelekileyo.
3.Ukutshatyalaliswa kobushushu obugqwesileyo ngenxa yesakhelo sangaphandle se-Aluminium alloy kunye nesakhiwo esikhethekileyo sangaphakathi.
I-4.i-permanent magnetic generator rotor usebenzisa i-alternator enelungelo elilodwa lomenzi, kunye noyilo olukhethekileyo lwe-stator, ukunciphisa ngokufanelekileyo ukuveliswa kwe-torque yokumelana, ngelixa ivumela ii-injini zomoya kunye nejenereyitha ineempawu ezifanelekileyo ezifanelekileyo, iyunithi iqhuba ukuthembeka.
FLTXNY 30KW 50KW 100KW ethe tye iturbine yomoya kwisixokelelwano segridi
1.Isantya sokuqala esisezantsi, iiblade ezi-6, ukusetyenziswa kwamandla omoya ophezulu
2.Ufakelo olulula, ityhubhu okanye uqhagamshelo lweflange ngokuzikhethela
3.Iiblayidi ezisebenzisa ubugcisa obutsha bokubumba inaliti echanekileyo, ehambelana nobume obuphuculweyo be-aerodynamic kunye nesakhiwo, esiphucula ukusetyenziswa kwamandla omoya kunye nemveliso yonyaka.
I-4.Umzimba wokuphosa i-aluminium alloy, kunye neebheringi ezi-2 ezijikelezayo, ziyenza iphile kumoya onamandla kwaye ibaleke ngokukhuselekileyo.
5.Ilungelo elilodwa lomenzi we-ac generator ene-stator ekhethekileyo, inciphisa ngokufanelekileyo i-torque, ifanise kakuhle ivili lomoya kunye nejenereyitha, kwaye uqinisekise ukusebenza kwenkqubo yonke.
I-6.Controller, i-inverter inokudityaniswa ngokuhambelana neemfuno ezithile zabathengi
I-1.i-injini yomoya iseti e-1(i-hub, umsila, i-3/5 iiblades, i-generator, i-hood, iibholiti kunye namandongomane).
2. isilawuli somoya 1 isiqwenga (Ukhetho).
3. isixhobo sokufakela i-1 iseti.
4.flange 1 iqhekeza.
FLTXNY 5kw 10kw 15kw 20kw ijenereyitha ye turbine yomoya ethe tye
Ukukhethwa kwentsimbi yentsimbi ecociweyo kodwa ibe, ubunzima obulula, imilo entle, ukungcangcazela okuphantsi.
Ukonyuka kwefayibha yeglasi eyomelezwe ngamagqabi erotor yeplastiki, umdlalo kunye nokulungiswa koyilo lwe-aerodynamic kunye noyilo lwesixhobo, ukuqala kwesantya somoya kusezantsi, ukusebenzisa amandla omoya aphezulu, ukonyusa umthamo wokuvelisa amandla.
Ukuveliswa kwamandla usebenzisa iteknoloji ye-patent ye-ndfeb esisigxina yemagnethi alternator rotor, i-stator yoyilo olukhethekileyo, ukunciphisa ngokufanelekileyo i-torque yokuxhathisa i-generator, kwangaxeshanye yenza ii-injini zomoya kunye neejenereyitha zibe neempawu ezihambelanayo ezilungileyo, ukuthembeka komsebenzi weyunithi.
Iphini elilawulayo lamkela uyilo lwe-yaw oluzenzekelayo, ukukwazi ukuxhathisa inkanyamba, ukusebenza ngokukhuselekileyo nokuthembekileyo.
Ukukhethwa kwe-anticorrosive epoxy zinc-rich primer kunye ne-polyurethane enamel, i-uv kunye nokumelana nemvula ye-asidi, inkungu yetyuwa.
Gcoba umatshini wokuzalisa ngokuzenzekelayo, izixhobo ezikrelekrele ngakumbi ukusebenza okuguquguqukayo, ubomi benkonzo ende.
Ukhetho oluphezulu lokulandelela amandla umlawuli okrelekrele, lawula ngokufanelekileyo umbane wangoku.
FLTXNY AMANDLA 1KW – 50KW Gearless Permanent Magnet Generator AC Alternators
1. Umhlaba onqabileyo wejenereyitha umazibuthe osisigxina
2.i-torque ephantsi yokuqalisa, ukusetyenziswa kwamandla omoya aphezulu;
3.ubungakanani obuncinci, inkangeleko entle, ukungcangcazela okuphantsi
4. uyilo olunobubele lomntu, ukufakwa lula, ukugcinwa kunye nokulungiswa.
5.osisigxina umazibuthe jenereyitha rotor usebenzisa
i-alternator enelungelo elilodwa lomenzi, kunye noyilo olukhethekileyo lwe-stator, ukunciphisa ngokufanelekileyo ukuveliswa kwe-torque yokumelana, ngelixa
ukuvumela iiinjini zomoya ezingaphezulu kunye nejenereyitha ineempawu ezifanelekileyo ezihambelanayo, iyunithi iqhuba ukuthembeka
100W 200w 300w 12v 24v 48v ezinye iijenereyitha zemagnethi ezisisigxina
1. Isakhiwo esilula, ukuthembeka okuphezulu.
2. Ubungakanani obuncinci, ubunzima obulula, amandla aphezulu.
3. Ukuvelisa amandla aphakathi kunye nesantya esiphantsi, ukusebenza kakuhle.
4. Inokwandisa kakhulu ubomi bebhetri, ukunciphisa ukugcinwa kwebhetri.
5. Ukusebenza okuphezulu.
6. Ijenereyitha yemagnethi esisigxina enebrashi, akukho sakhiwo seringi esityibilikayo, ukuphelisa ibrashi yekhabhoni kunye nokutyibilika komsesane owenziwe kuphazamiseko lukanomathotholo, kodwa ikwanciphisa ijenereyitha kwiimfuno zobushushu obukhoyo.
I-5kw – 20kw 48v 96v 120v 220v 380v i-alternator yemagnethi esisigxina
20A 12V 24V AUTO MPPT isilawuli setshaja yeinjini yomoya
Izindlu zeAluminiyam zokupholisa ngcono, ukhuseleko lwe-IP67
● Ukhuseleko olungaphezulu kwentlawulo, ukhuseleko lwesekethe emfutshane yombane.
● Umlawuli unomsebenzi wokukhusela ukushisa okuphezulu
● Izibane zesalathisi zibonisa iimeko zenkqubo.
●Ukonyusa umsebenzi wokutshaja.Iyakwazi ukutshaja kwimpepho.
FLTXNY 1kw 2kw 3kw eHorizontal Wind Turbine Generator Ukusetyenziswa eKhaya
1. Izindlu zentsimbi ye-A3, yenza ubungakanani obuncinci, ubunzima obulula, ukubonakala okuhle kunye nokungcangcazela okuphantsi kokusebenza.
Uxhulumaniso lwe-2.flange luqinisekisa amandla amahle, ukufakwa lula kunye nokugcinwa.
3.i-fiberglass turbine blades eziphuculweyo ezinoyilo oluphuculweyo lwemilo ye-aerodynamic kunye noyilo lwesakhiwo, zinokuthoba isantya sokuqala somoya kunye nokusetyenziswa okuphezulu kwamandla omoya.
Iblade iqatywe ngeresin yejeli yedyasi kwaye ipeyintwe ukuxhathisa ukubola ngumoya namanzi.
4. umphini wokujika umsila ozenzekelayo uxhobisa le turbine yomoya ethe tye (umsila ujinga ngokuzenzekela kumoya omkhulu kwaye ubuyele ngokuzenzekelayo kumoya okhuselekileyo) umthamo ophezulu wokulwa nenkanyamba.
5. uyilo lwe-rotor yangaphandle yemagnethi esisigxina, yanciphisa i-torque yokumelana kunye nokusebenza kakuhle kakhulu kokuchithwa kobushushu xa kuthelekiswa nejenereyitha ye-rotor yangaphakathi.
6. I-42NSH isiqwenga sentsimbi enozibuthe sinamandla amakhulu kunye nokumelana nobushushu obuphezulu.
7. Ucingo lwe-enameled lwe-F-class lunokumelana nobushushu obuyi-150 degrees; ukhuseleko lokusebenza ikhoyili luqinisekisiwe.
8. iqokobhe lomzimba liqatywe i-dacromet kwaye lipeyintiwe kabini lokulwa nokubola, ukuqinisekisa ukuba akukho mhlwa emva kokusebenza ixesha elide.
S2 200w 300w 12v 24v 48v eHorizontal Wind Turbine Generator
S3 600w 800w 12v 24v 48v ijenereyitha ye turbine yomoya encinci ethe tye
1.Isantya sokuqala esisezantsi, iiblade ezi-3, ukusetyenziswa kwamandla omoya ophezulu
SC 400W 600W 800W AC ijenereyitha yomoya encinci yekhaya/isitalato
SUN 400w 800w 12v 24v 6 iiBlades eziHorizontal Wind Turbine Generator
I-Wuxi Flyt New Energy Technology Co.,Ltd., ngumvelisi oqeqeshiweyo weenkqubo zeinjini yomoya ezincinci kunye neziphakathi kunye nezincedisi ezifanelekileyo.
Umgangatho we-2, indawo ye-Ofisi, iNombolo ye-712, iZhenze Road, iSithili saseXuelang, iSithili saseBinhu, eWuxi, eChina